Ko Thar Gyi posted in လွပ်လပ်ခြင်းKo Thar Gyi 05 July 03:45 မှုသားစကားပေါင်းချုပ်စာအုပ်ထုတ်ရန်အတွက်....သတင်းစာမျက်နှာဖုံးများဝယ်ယူလိုသည်။View Post on Facebook · Edit email settings · Reply to this email to addacomment.
Ye Thurein Min posted in Freedom BurmaYe Thurein Min 05 July 03:327July (Burmese Students Were Killed Dynamite)The Faith (Foreword) The red stream ows andits converted us to another life.View Post on Facebook · Edit email settings · Reply to this email to addacomment.
Kyi Wah Htun posted in Freedom BurmaKyi Wah Htun 05 July 03:25 Admired Man and His Words..ဒီလဟာ ငါတို့ဖခင်ထက် မြင့်မြတ်တဲ့လူတယောက်ကြွေလွင့်တဲ့လ။ သင်ကြွေလွင့်သွားခဲ့သော်လည်း သင်၏အနှိုင်းမဲ့ပေ...View Post on Facebook · Edit email settings · Reply to this email to addacomment.
Kyi Wah Htun posted in Freedom BurmaKyi Wah Htun 05 July 03:24 Admired Man and His Words..ဖခင်..ဖြစ်နိုင်ရင် တချက်လောက်လာကြည့်လှည့်ပါဦးလို့ ငိုကြွေးမြည်တမ်းချင်ပါဘိ။ ကျွန်ုပ်တို့အပေါ်ထားရှိေ...View Post on Facebook · Edit email settings · Reply to this email to addacomment.
Komyo Aung posted in Freedom from Fear 2Komyo Aung 05 July 03:10 မန္တလေးရောက် ပြည်ကြီးပေါက်www.mizzimaburmese.comမဇ္ဈိမသတင်းဌာန - ပြည်သူကို အလုပ်အကျွေးပြုရန် လွတ်လပ်သော မြန်မာသတင်းဌာနView Post on Facebook · Edit email settings · Reply to this email to addacomment.
[Big Brothers & Sisters] New doc: ၅-၇-၁၁ နေ့ မနက် သတင်းနှင့်ဆောင်းပါးများ
UZa Wana posted in Big Brothers & SistersUZa Wana created the doc: "၅-၇-၁၁ နေ့ မနက် သတင်းနှင့်ဆောင်းပါးများ"တနင်္လာ, 04 ဇူလိုင် 2011 ဒေါ်စု ပုဂံဘုရားဖူး ခရီးထွက် ဓာတ်ပုံ ASSOCIATED PRESS မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီ ခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပုဂံဟိုတယ်သို့ ရောက်ရှိလာရာ ကြိုဆိုသူများနှင့် တွေ့ရစဉ်။ ဇူလိုင် ၄၊ ၂၀၁၁။ မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီ ခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ နေအိမ်အကျယ်ချုပ်က လွတ်မြောက်လာခဲ့ပြီးနောက် ပထမဦးဆုံးအကြိမ် နယ်ခရီးစဉ် အဖြစ်နဲ့ တနင်္လာနေ့ကနေ သောကြာနေ့အထိ ပုဂံ၊ ညောင်ဦးကို သွားရောက်နေပါတယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ နယ်ခရီးစဉ်တွေအတွင်း အသက်အန္တရာယ် ရှိမှာကို ကမ္ဘာ့ခေါင်းဆောင်တွေက ပူပန်ကြသလိုပဲ ပြည်တွင်းမှာလည်း စိုးရိမ်နေကြပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ နိုင်ငံသားတဦး အနေနဲ့ လွတ်လပ်စွာ သွားလာခွင့်တွေ ရှိရမှာ ဖြစ်သလို နိုင်ငံသားတိုင်းရဲ့ လုံခြုံရေးဟာလည်း အုပ်ချုပ်သူ အစိုးရမှာ တာဝန်ရှိတယ်လို့ သတ်မှတ်ကြပါတယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ အခုခရီးစဉ် အခြေအနေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဘန်ကောက်ရုံးကနေ ဆက်သွယ် မေးမြန်းထားတဲ့ ဒေါ်ခင်မျိုးသက်က တင်ပြပေးထားပါတယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ နိုဝင်ဘာလ ၁၃ ရက်နေ့မှာ နေအိမ်အကျယ်ချုပ်ကနေ လွတ်မြောက်လာခဲ့ပြီးနောက် ၇ လနီးပါး ရန်ကုန်မှာပဲ နိုင်ငံရေးနဲ့ လူမှုရေး ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်တွေကို ဆောင်ရွက်နေရာက အခု ပုဂံ၊ ညောင်ဦးကို သွားရောက်ခဲ့တယ်လို့ အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် ပြောခွင့်ရ ဦးဝင်းထိန်က ပြောပါတယ်။ "ပုဂံ၊ ညောင်ဦး ရောက်နေပါပြီ။ မနက်ခင်း ၈ နာရီ ၁၀ မိနစ်လောက်ကတည်းက ရောက်နေပါတယ်။ အခုဟာ နိုင်ငံရေး လှုပ်ရှားမှုနဲ့ မပတ်သက်ဘူး၊ စည်းရုံးရေးနဲ့လည်း မပတ်သက်ဘူး။ နှစ်ပေါင်း ၂၂ နှစ်ကြာ ကာလပတ်လုံး သူ့သားတွေကို လျစ်လျူရှုထားတာကို ပြန်ပြီးတော့ ထေတဲ့အနေနဲ့ သားငယ်ကို အချိန်ပေးပြီး ပုဂံကို ဘုရားဖူးသွားတာ။ သွားတဲ့အခါမှာ အဲဒီ မြို့နယ်တွေမှာရှိတဲ့ NLD တွေကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို နိုင်ငံရေးကိစ္စတွေ မဆွေးနွေးပါနဲ့၊ လာမပြောပါနဲ့ ဆိုပြီးတော့ ကျနော်တို့ တားထားတယ်။" သားငယ်ဖြစ်သူ ကိုထိန်လင်းကတော့ တနင်္ဂနွေနေ့ မနက်ကတည်းက NLD လူငယ်တချို့နဲ့အတူ ရန်ကုန်က ထွက်ခွာခဲ့ပြီး နေပြည်တော်ဘက်ကနေ ပုဂံကို ကားနဲ့ သွားရောက်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီ ပုဂံ၊ ညောင်ဦး ခရီးစဉ်မှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အဓိက ဘုရား ၂ ဆူကို ဖူးတို့အတွက် ရည်ရွယ်ထားတယ်လို့လည်း ဦးဝင်းထိန်က ပြောပါတယ်။ "သွားမှာ သိတာကတော့ ဘာသာရေးနဲ့လည်း ပတ်သက်တယ်၊ ပြီးတော့ တိုင်းရင်းသားတွေနဲ့လည်း ပတ်သက်တဲ့ဟာ၊ ရည်ရွယ်ထားတာ ဘုရား ၂ ဆူပဲ ဖူးမယ်လို့ ရည်ရွယ်တယ်။ တခုက မနူဟာ၊ အနော်ရထာမင်း လက်ထက်တုန်းက သုံ့ပန်းဖြစ်ခဲ့တဲ့ မနူဟာဘုရားပေါ့။ နောက်တခုက ကျန်စစ်သား တည်ခဲ့တဲ့ အာနန္ဒာဘုရား။ ပုဂံခေတ် ပုဂံရာဇ၀င်မှာဆို ကျန်စစ်သားက တိုင်းရင်းသား စည်းလုံးညီညွတ်ရေး ဦးစားပေး လုပ်ခဲ့တဲ့ ဘုရင်ကိုး။ ဒီဘုရား ၂ ဆူကိုတော့ ဦးစားပေးပြီးတော့ သွားကန်တော့မယ်ဆိုတာ ကျနော်တို့ သိရပါတယ်။" နိုင်ငံရေးမပါဘဲ ဘုရားဖူးသက်သက် သွားရောက်တာ ဖြစ်ပေမဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ လုံခြုံရေးအတွက် စိုးရိမ်ရတယ်လို့လည်း ပြောပါတယ်။ "ကျနော်တို့ ဒီကနေ လူငယ် ၁၁ ယောက် ပါသွားတယ်။ မန္တလေးတိုင်းကလည်း လူငယ် ၂၀ ပါမယ်။ နောက်ပြီးတော့ ဟိုတယ်အနား တ၀ိုက်မှာရှိတဲ့ လုံခြုံရေးလည်း ရှိတယ်။ အဲဒီ လုံခြုံရေးက လူ လေးငါးဆယ်လောက်က နေ့ကင်း ညကင်း၊ နေ့ကင်း ညကင်းဆိုတာ ဘာလက်နက်မှ မပါဘူးနော်။ ကျနော်တို့လည်း စိတ်ပူတာပေါ့။" နေအိမ်အကျယ်ချုပ်ကနေ လွတ်မြောက်လာခဲ့ပြီးတဲ့နောက် ပထမဆုံး ခရီးထွက်လာတဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ လုံခြုံရေးအတွက် NLD ကသာမက ၈၈ မျိုးဆက် ကျောင်းသားအဖွဲ့ကလည်း စိတ်ပူတာမို့ သူတို့အစီအစဉ်နဲ့ သူတို့ လိုက်ပါသွားကြပြီး အဖွဲ့သားတဦးဖြစ်တဲ့ ကိုတိုးကျော်လှိုင်က ပုဂံ၊ ညောင်ဦးက လုံခြုံရေး အနေအထားကို အခုလို ပြောပြပါတယ်။ "လုံခြုံရေး အခြေအနေကတော့ အခုထိ အေးအေးချမ်းချမ်း ရှိတာကို တွေ့ရပါတယ်။ အန်တီက မနက် ၈ နာရီ ၁၀ မိနစ်၊ ၁၅ မိနစ်လောက်မှာ လေယာဉ်ဆိုက်ပါတယ်။ နောက် လမ်းမှာလည်း အေးအေးချမ်းချမ်း ကြိုဆိုကြတာမျိုး ရှိပါတယ်။ ပြီးတော့ အစိုးရဘက်ကလည်း ယူနီဖောင်း မဟုတ်ဘဲ အရပ်ဝတ်တွေနဲ့ ရဲအရာရှိတွေကနေပြီးတော့ အများကြီး လိုက်ပြီး ကူညီ ဆောင်ရွက်ပေးတာမျိုးတွေလည်း တွေ့ရပါတယ်။ ဟိုတယ်ကလည်း အားလုံးကို ပျူပျူငှာငှာပါပဲ။ အစစ အရာရာ လိုလေသေး မရှိအောင်လည်း ဟိုတယ်က ပြင်ဆင်ပေးပါတယ်။ လုံခြုံရေးကိစ္စအတွက် ဟိုတယ်နဲ့ ညှိနှိုင်းပြီးတော့ လုပ်ချင်တဲ့ ပုံသဏ္ဌာန်တွေ ပြောပြတဲ့ အခါမှာလည်း ဟိုတယ်ကနေပြီး အပြည့်အ၀ လိုက်ပါ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ပေးတာမျိုးတွေ အများကြီး ရှိပါတယ်။" ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ နိုင်ငံသားတဦး အနေနဲ့ ပြည်တွင်းမှာ ခရီးထွက်ခွင့် ရှိသလို လွတ်လပ်စွာ သွားလာခွင့်လည်း ရှိပြီး နိုင်ငံသားတဦးရဲ့ လုံခြုံရေးဟာ အုပ်ချုပ်သူ အစိုးရမှာ တာဝန်ရှိတယ်လို့ ၀ါရင့် နိုင်ငံရေးသမားကြီး သခင်ချန်ထွန်းက ပြောပါတယ်။ "လွတ်လပ်စွာ သွားလာခွင့် ရှိရမှာပေါ့။ ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံ သူတို့ ထူထောင်ထားပြီး ရွေးကောက်ပွဲလုပ်တယ်၊ ဘာလုပ်တယ်ဆိုတော့၊ အန္တရာယ်ရှိတာ မရှိတာကို၊ အမှန်ကတော့ သွားရမှာပဲလေ။ သို့သော်လည်း သတိထားသင့်တာက ညကို မသွားဘဲ နေ့ကိုပဲ သွားသင့်တယ်လို့ ဒီလိုပဲ တိုက်တွန်းချင်တယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ဂရုမစိုက်ဘူးဆိုပြီး ညကြီးသွားရင် ရန်သူဆိုတာ မမြင်နိုင်ဘူးလေ။ ညတော့ ရှောင်ဖို့ကောင်းတယ်။ "အရင်တခါ ကြံစည်တုန်းကလည်း ညကြီး ၈ နာရီမို့၊ ရွှေဘိုခရိုင် ဒီပဲယင်းမှာ ဖြစ်ခဲ့တာလည်း။ နေ့လယ်ဘက်ပဲ မနက် ၅ နာရီက ညနေ ၅ နာရီလောက်ပဲ မော်တော်ကားနဲ့ သွားဖို့ကောင်းတယ်လို့ ဒီလိုပဲ တွက်ပါတယ်။ အစိုးရ အနေနဲ့လည်း တကယ်လို့ ဖြစ်ရင် လုံးဝ တာဝန်က ကြီးသွားပြီ။ ပုဂံမြို့ဆိုတာ တကမ္ဘာလုံးက ဧည့်သည်တွေလာပြီး ကြည့်ရှုတဲ့ နေရာဒေသလေ။ အဲတော့ တစုံတခုဖြစ်ရင် အန္တရာယ်ပြုတာတွေ သူတို့က လုံးဝ တာဝန်ယူရမှာပဲ။" ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နယ်ကို အခုလို ခရီးစထွက်လာတာမို့ နယ်က ဒေသခံတွေက ၀မ်းမြောက်နေကြသလို သူတို့ဒေသတွေကို လာရောက်ဖို့ပါ စောင့်မျှော်နေကြပေမဲ့ အခုလို ဘုရားဖူး မဟုတ်ဘဲ နိုင်ငံရေးကိစ္စနဲ့ လာမယ် ဆိုရင်တော့ လုံခြုံရေးကို စိတ်ပူနေကြတယ်လို့ မုံရွာဒေသခံ တဦးက ပြောပါတယ်။ "လူတွေကတော့ မျှော်နေကြတာပေါ့။ ခါတိုင်းတော့ နည်းနည်း လှုပ်လှုပ်ရှားရှား ရှိတယ်လေ၊ ကြံ့ဖွံ့နဲ့ လုံခြုံရေး တပ်ဖွဲ့တွေက။ အခုတော့ အဲဒီဟာ ဘာမှ လှုပ်လှုပ်ရှားရှား အသံတော့ မကြားသေးဘူးဗျ။ ငြိမ်နေတဲ့ သဘောပေါ့။ အရင်ကတော့ လှုပ်လှုပ်ရှားရှား ရှိတယ်ပေါ့။ အစိုးရဘက်ကရော၊ ဒေါ်စုတို့ဘက်ကရော။ အခုတော့ ဘာမှ လှုပ်လှုပ်ရှားရှား မရှိပါဘူး။ ဒီဘက်က ရှိထားတာ ဒီပဲယင်း အရေးအခင်း ရှိထားတာကိုး။ သေချာပေါက် ပြောလို့တော့ မရဘူး။ နည်းနည်း ဂရုစိုက်မှ၊ အာရုံထားမှပေါ့။ အဲဒီပုံစံမျိုး မ၀င်ဘူးလို့ မပြောနိုင်ဘူးလေ။" ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ ဒီခရီးစဉ်အတွက် အန္တရာယ် ကျရောက်မှာကို စိုးရိမ်ကြောင်း စနေနေ့ကမှ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ တွေ့ဆုံခဲ့တဲ့ သြစတြေးလျ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး မစ္စတာ ကယ်ဗင် ရပ်ဒ် (Kevin Rudd) က ထုတ်ဖော် ပြောကြားခဲ့သလို ရှေ့လာမယ့် နယ်စည်းရုံးရေး ခရီးစဉ်တွေအတွင်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အဖို့ လုံခြုံမှု ဘယ်လောက်ရှိတယ် ဆိုတာဟာ မြန်မာအစိုးရသစ်ကို စမ်းသပ်တာမျိုး ဖြစ်ပြီး လက်ရှိ အာဏာပိုင်တွေမှာ လုံးဝ တာဝန်ရှိတယ်လို့ တနင်္လာနေ့ မနက်ပိုင်းမှာ သြစတြေးလျ အသံလွှင့်ဌာနတွေကို ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ http://www.voanews.com/burmese/news/ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ယနေ့ ပုဂံ ဘုရားများ မဖူးဖြစ် ရန်ပိုင် Monday, 04 July 2011 11:44 ပုဂံမြို့သို့ ရောက်ရှိနေသည့် မြန်မာ့ ဒီမိုကရေစီ ခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် ယနေ့ ပြင်ပသို့ ဘုရားဖူး သွားရောက်မည် မဟုတ်ကြောင်း သိရသည်။ ပုဂံသို့ ရောက်ရှိလာသည့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် (ဓာတ်ပုံ - ဧရာဝတီ) ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် ယနေ့နံနက် ၈နာရီ ၂၀ခန့်က အဲမန္တလေး လေယာဉ်ဖြင့် မန္တလေးတိုင်း ပုဂံ- ညောင်ဦး လေဆိပ်သို့ ရောက်ရှိလာခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး ခရီးပန်းသည့်အတွက် အနားယူမည်ဖြစ်သည်ဟု လိုက်ပါသွားသည့် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် (NLD)အဖွဲ့ဝင် တဦး က ဆိုသည်။ ပုဂံ- ညောင်ဦး ဒေသရှိ သက်ဆိုင်ရာ ဘုရား ဂေါပက အဖွဲ့များအား ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို တခမ်းတနား ကြိုဆိုခြင်း၊ အလှူငွေလက်ခံခြင်းများ မပြုလုပ်ရန် ညောင်ဦး ခရိုင် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးက တားမြစ်သတိပေးထားသည်ဟု The Voice Weekly ဂျာနယ် အင်တာနက် စာမျက်နှာတွင်လည်း ရေးသားထားသည်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နှင့် အတူ လုံခြုံရေးတာဝန်ယူထားသည့် အဖွဲ့ဝင် ၄ ဦးလိုက်ပါသွားပြီး သားဖြစ်သူ ကိုထိန်လင်းမှာ NLDအဖွဲဝင် လူငယ် ၁၂ ဦးနှင့် ယမန်နေ့ ညနေကပင် ကားဖြင့် ထွက်ခွာခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ဟု NLD အဖွဲ့ဝင် က ပြောသည်။ "လေကြောင်းလိုင်းရော လေဆိပ်ကပါ အားလုံးဂရုစိုက်ကြတယ်၊ အာဏာပိုင်တွေက လုံခြုံရေးလည်း အားလုံး တာဝန်ယူကြတယ်၊ အဖွဲ့ချုပ်ကလည်း အတွင်းစည်းအပြင်စည်း တာဝန်ယူထားတယ်"ဟု ၎င်းက ပြောပြသည်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် အဖွဲ့သည် ပုဂံမြို့ရှိ Bagan Hotel River View ဟိုတယ်တွင် တည်းခိုကြသည်။ ၄ ရက်ကြာမည့် ယခု ပုဂံ ခရီးစဉ်သည် ပြီးခဲ့သည့်နှစ် နိုဝင်ဘာလက နေအိမ်အကျယ်ချုပ်မှ လွတ်မြောက်လာပြီး နောက်ပိုင်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ၏ ပထမဆုံး ခရီးစဉ်ဖြစ်သည်။ ပုဂံ ခရီးစဉ်သည် မိသားစု ခရီးစဉ်ဖြစ်သည့်အတွက် စည်းရုံးရေးလုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်ခြင်း၊ လူထုနှင့် တွေ့ဆုံခြင်းများကို လုပ်ကိုင်ဦးမည်မဟုတ်ဟုလည်း NLD အဖွဲ့ဝင်က ဆက်လက်ပြောသည်။ ခရီးစဉ်မတိုင်မီ NLD ပါတီ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးအောင်ရွှေနှင့် အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ထံ လိပ်မူ၍ NLD ပါတီ၏ ရပ်တည်မှု အနေအထားနှင့်ပတ်သက်၍ မေးခွန်းထုတ်ခဲ့သည့်အပြင် လက်ရှိလုပ်ဆောင်နေသည့် လုပ်ငန်းများရပ်တန့်ပြီး မှတ် ပုံတင်ရန် သတိပေးစာ ပေးပို့ခဲ့သည်ဟု အစိုးရသတင်းစာများ၌ ဖော်ပြထားသည်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် ခရီးစဉ်မတိုင်မီ ဇူလိုင်လ၂ ရက်က သြစတြေးလျ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ကယ်ဗင် ရုဒ် နှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့သေးသည်။ စစ်တိုင်းမှူးများ အပြောင်းအလဲလုပ် ရန်ပိုင် Monday, 04 July 2011 16:33 ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်ကြီး မင်းအောင်လှိုင်က လက်ရှိ စစ်တိုင်းကြီးများအား တာဝန်ယူနေသည့် တိုင်းမှူးများကို ပြီးခဲ့သည့် သောကြာနေ့က နေရာ အပြောင်းအလဲ ပြုလုပ်လိုက်ကြောင်း နေပြည်တော် စစ်ဘက် အသိုင်းအ၀န်းမှ သိရသည်။ ထိုပြောင်းလဲမှုတွင် ရန်ကုန်တိုင်း စစ်ဌာနချုပ် တိုင်းမှူး ဗိုလ်မှူးချုပ် ထွန်းသန်း၊ အရှေ့တောင်တိုင်း စစ်ဌာနချုပ် တိုင်းမှူး ဗိုလ်မှူးချုပ် ထွန်းနေလင်း၊ အနောက်ပိုင်းတိုင်း စစ်ဌာနချုပ် တိုင်းမှူး ဗိုလ်မှူးချုပ် စိုးသိန်း၊ အနောက်တောင်တိုင်း စစ်ဌာနချုပ် တိုင်းမှူး ဗိုလ်မှူးချုပ် တင်မောင်ဝင်းတို့ ပါဝင်ကြောင်း စစ်ဘက်နှင့် နီးစပ်သူ တဦးကပြောသည်။ "ကာချုပ်က အသစ်ဆိုတော့ သူထားချင်တဲ့ သူတွေကိုအဲဒီနေရာမှာထားဖို့လုပ်တာ၊ ဘာအကြောင်းပြချက်မှမပေးဘူး"ဟု ၎င်းကဆို သည်။ ပြီးခဲ့သည့် ရက်ပိုင်းက နေပြည်တော်၌ ပြုလုပ်ခဲ့သည့် စစ်တပ် လေးလပတ် အစည်းအဝေးတွင် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး ဗိုလ်ချုပ်ကြီး မင်းအောင်လှိုင် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် တာဝန်ယူခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်း ပထမဆုံးအကြိမ် စစ်တိုင်းမှူး အပြောင်းအလဲ ပြုလုပ်ခြင်း ဖြစ် သည်။ ယင်းပြောင်းလဲမှုမှာ စစ်တိုင်းမှုးအချင်းချင်းနေရာ ပြောင်းလဲတာဝန်ယူခိုင်းခြင်း ဖြစ်သည်။ ကချင် လွတ်လပ်ရေး တပ်မတော်(KIA)ကလည်း အဆိုပါ သတင်းနှင့် ပတ်သက်၍ စုံစမ်းသိရကြောင်း အတည်ပြု ပြောကြား သည်။ အဆိုပါ စစ်တိုင်းမှူးများသည် ပြီးခဲ့သည့်နှစ် သြဂုတ်လက ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် စစ်တပ်ရာထူးအပြောင်းအရွှေ့၌ တိုင်းမှူးတာဝန်ကို ရယူခဲ့ သူများဖြစ်သည်။ လက်ရှိ မြန်မာ့တပ်မတော် ဖွဲ့စည်းပုံတွင် စစ်တိုင်းကြီး စုစုပေါင်း ၁၄ ခုဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားပြီး တပ်မ စစ်ဌာနချုပ် ၁၀ ခု၊ စစ်ဆင်ရေး ကွပ်ကဲမှု စစ်ဌာနချုပ် ၂၀ ဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသည်။ ပြီးခဲ့သည့်မေလအတွင်းကလည်း တပ်မမှူးများနှင့် စစ်ဆင်ရေးကွပ်ကဲမှု စစ်ဌာနချုပ်(စကခ) မှူးများကို နေရာအပြောင်းအလဲ ပြုလုပ်ခဲ့သေးသည်။ နေပြည်တော် စစ်ဘက်အသိုင်းအ၀န်းတွင် ပြောဆိုနေသည့် အတည်မပြုနိုင်သော သတင်းများအရ ယခုစစ်တပ်အပြောင်းအလဲကို ပြုလုပ်ရန် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမင်းအောင်လှိုင်အား ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သန်းရွှေက နောက်ကွယ်မှ ကြိုးကိုင် ခိုင်းစေနေခြင်းဖြစ်သည်ဟု ပြောဆိုနေကြကြောင်း သိရသည်။ ဒု သံရုံး တာဝန်ခံ ဦးကျော်ဝင်း နိုင်ငံရေး ခိုလှုံခွင့်တောင်း လင်းသန့် Monday, 04 July 2011 13:25 အမေရိကန်နိုင်ငံဆိုင်ရာ မြန်မာသံရုံး ဒုတိယ အကြီးအကဲဖြစ်သည့် ဦးကျော်ဝင်းသည် ဇူလိုင် လ ၄ ရက်နေ့တွင် အမေရိကန် နိုင်ငံ ၌ နိုင်ငံရေးခိုလှုံခွင့် တောင်းခံ လိုက်ကြောင်း ဧရာဝတီက စုံစမ်း သိရှိရသည်။ အမေရိကန် နိုင်ငံခြားရေး ၀န်ကြီး မစ္စ ဟီလာရီ ကလင်တန် ထံသို့ ယနေ့ ရက်စွဲဖြင့် ဦးကျော်ဝင်းမှ ပေးပို့သည်ဟု ယုံကြည်ရသော စာတစောင်တွင် ၄င်းအနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံနှင့် အမေရိကန် နိုင်ငံတို့ကြား ကောင်းမွန်သော ဆက်ဆံရေးတည်ဆောက်နိုင်ရန် အကြံ ပြုစာများကို မြန်မာအစိုးရထံပေးပို့ခဲ့သော်လည်း အမြဲပယ်ချခံရကြောင်း၊ ထိုသို့ ဆောင်ရွက်မှုများကြောင့် ၎င်းတွင် အန္တရာယ်တစုံ တရာ ကြုံလာနိုင်ကြောင်းလည်း ရေးသားထားသည်။ "ကျနော့်နိုင်ငံသားတွေအတွက် တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသလို မခံစားရတော့ဘူး။ နိုင်ငံသားတွေအကျိုးကိုဆန့်ကျင် လုပ်ဆောင် နေ တဲ့ အစိုးရကိုအလုပ်အကျွေးပြုခြင်းကနေ ကျနော် စွန့်လွှတ်လိုက်ပါပြီ"ဟု ဦးကျော်ဝင်းက စာထဲတွင် ပြောဆိုထားသည်။ ယင်းစာတွင် စစ်တပ်ထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်များက အာဏာကို ဆက်လက်ချုပ်ကိုင်ထားနေကြပြီး ဒီမိုကရေစီရေးတောင်းတသံများကို ပုံဖျက်ရန် ကြိုးစားနေကြောင်း၊ လက်ရှိ ဖြစ်ပေါ်နေသော အစိုးရတပ်နှင့် ကချင် အပါအ၀င် တိုင်းရင်းသား ဒေသများတွင်ဖြစ်ပေါ်နေသော စစ်ပွဲများကိုလည်း ဝေဖန်ထောက်ပြသည်။ ထို့အပြင် ယခု ပုဂံတွင် ဘုရားဖူးရောက်ရှိနေသော မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ လုံခြုံရေးကို အစိုးရ က ခြိမ်းခြောက်နေမှုများနှင့်ပတ်သက်၍လည်း သတိပေးထားပြီး ကုလသမဂ္ဂမှ လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်း(CoI)ရေးကိုလည်း ထောက်ခံကြောင်း ဖော်ပြထားသည်။ အသက် ၅၉ နှစ်ရှိ ဦးကျော်ဝင်းသည် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနတွင် ၁၉၈၀ ခုနှစ်မှ စတင်ကာ တာဝန် ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီး လုပ်သက် ၃၁ နှစ် ရှိသော်လည်း ယခုအခါ မြန်မာအစိုးရအပေါ် ယုံကြည်မှုလုံးဝမရှိတော့ကြောင်းနှင့် ဒီမိုကရေစီနှင့်ပတ်သက်၍လည်း အရိပ် အယောင်မျှ မရှိကြောင်း၊ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှ မြန်မာအစိုးရထိပ်ပိုင်း ခေါင်းဆောင်များအပေါ် စီးပွားရေးဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့အရေးယူခြင်းကိုထောက်ခံကြောင်းလည်း ၄င်း၏ စာတွင် ရေးသားခဲ့သည်။ "မြန်မာနိုင်ငံမှာ အခုရွေးကောက်ပွဲအပြီး တက်လာတဲ့ အစိုးရသစ်အပေါ် သူ့ဝန်ထမ်းတွေကစပြီး ယုံကြည်မှု မရှိတော့တာကိုပြသ လိုက်တာပါပဲ"ဟု ကုလသမဂ္ဂ ဆိုင်ရာ ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံ အဝေးရောက် ညွန့်ပေါင်းအစိုးရ ကိုယ်စားလှယ် ဒေါက်တာ သောင်း ထွန်းက ဧရာဝတီကို ပြောသည်။ ယခုကဲ့သို့ သံမှူးတဦးအနေဖြင့် ပြည်ပ နိုင်ငံတနိုင်ငံ၌ နိုင်ငံရေးခိုလှုံခွင့်တောင်းခံခြင်းသည် မြန်မာနိုင်ငံတွင် အရပ်သားအစိုးရ တက်လာပြီးနောက်ပိုင်း ပထမဆုံးဖြစ်သည်။ ယခင်စစ်အစိုးရ လက်ထက် အမေရိကန်နိုင်ငံတွင် နိုင်ငံရေးခိုလှုံခဲ့သော အမေရိကန်အခြေစိုက် မြန်မာသံရုံး တာဝန်ခံ သံမှူး ဗိုလ်မှူးဟောင်း ဦးအောင်လင်းထွဋ် ပြီးနောက် ဒုတိယမြောက် နိုင်ငံရေးခိုလှုံခွင့် တောင်းခံခြင်းဖြစ်သည်။ ဦးအောင်လင်းထွဋ်က"သူက မြန်မာနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဦးဝဏ္ဏမောင်လွင် ဆီကို သူ့သား ၀ါရှင်တန်မှာ နေထိုင်ခွင့်ပြုဖို့ တောင်း တယ်ကြားတယ်။ သူ့ကို ဒီကိစ္စ ဒေါသဖြစ်သွားတယ်ကြားတယ်။ သူ မြန်မာပြည် ပြန်ရင် သူ့အတွက် အန္တရာယ် ရှိနိုင်တယ်။ သူက မြန်မာအစိုးရကိုလည်း စိတ်ပျက်နေပြီ ကျနော်ထင်တယ်"ဟု ပြောဆိုသည်။ ထိုင်း ပထမဆုံး အမျိုးသမီးဝန်ကြီးချုပ် မစ္စ ယင့်လပ် ဖြစ်လာမည် ရန်ပိုင် Monday, 04 July 2011 19:36 ထိုင်းနိုင်ငံ၏ တနင်္ဂနွေနေ့က ရွေးကောက်ပွဲတွင် မစ္စ ယင့်လပ် ရှင်နာဝပ် ဦးဆောင်သည့် ဖုယာ့ထိုင်း ပါတီက လက်ရှိ ၀န်ကြီးချုပ် အဖိဆစ် ဝေ့ချာချီဝ၏ ဒီမိုကရက် ပါတီကို မဲအပြတ်အသတ်ဖြင့် အနိုင်ရ၍ ထိုင်းနိုင်ငံ၌ ပထမဆုံး အမျိုးသမီး ၀န်ကြီးချုပ် ဖြစ်လာ တော့မည်။ အဆိုပါ ရွေးကောက်ပွဲ၌ လက်ရှိ အာဏာရ ဒီမိုကရက် ပါတီက အမတ်နေရာ ၁၆၀ နေရာတွင်သာ အနိုင်ရရှိခဲ့ပြီး အတိုက်အခံ ဖုယာ့ထိုင်း ပါတီက၂၆၂ နေရာရရှိခဲ့သည်။ မစ္စ ယင့်လပ် ရှင်နာဝပ်သည် လာဘ်စားမှုဖြင့် ၀ရမ်းထုတ်ခြင်းခံထားရသည့် ၀န်ကြီးချုပ်ဟောင်း မစ္စတာ သက်ဆင် ရှင်နာဝပ်၏ ညီမ အငယ် ဆုံးဖြစ်သည်။ မစ္စ ယင့်လပ် မှာ မစ္စတာ သက်ဆင်၏ ကိုယ်ပွားတယောက်ဖြစ်သည်ဟုလည်း ထိုင်း နိုင်ငံရေးလောကတွင် နာမည်ကြီးသူ တဦးဖြစ်သည်။ ၀န်ကြီးချုပ် အဖိဆစ် ဝေချာချီဝကမူ မစ္စ ယင့်လပ် ရွေးကောက်ပွဲ ၀င်ရောက်ခြင်းသည် တိုင်းပြည်အတွက် အကျိူးပြုရန် မဟုတ်ဘဲ အစ်ကိုဖြစ်သူ မစ္စတာ သက်ဆင် ပြည်တော်ပြန်နိုင်ရေးအတွက် ကြိုးပမ်းနေခြင်းဖြစ်သည်ဟု မဲဆွယ်စည်းရုံးရာတွင် ပြောဆိုခဲ့သည်။ မစ္စ ယင့်လပ်သည် ထိုင်းနိုင်ငံရေး လောကသို့ ၀င်ရောက်ခဲ့သည်မှာ သီတင်း ၆ပတ်သာ ကြာမြင့်သေးသော်လည်း ယခုရွေး ကောက်ပွဲတွင် မဲအပြတ်အသတ်ဖြင့် အနိုင်ရခဲ့သည့်အတွက် အစ်ကိုဖြစ်သူ၏ သြဇာအရှိန်အ၀ါဖြင့် အနိုင်ရခြင်းဖြစ်သည်ဟု ပြောဆိုမှုများလည်း ရှိနေသည်။ ရွေးကောက်ပွဲ အနိုင်ရ ဖူးယာ့ထိုင်း ပါတီသည် ချတ်ထိုင်းပါတီ အပါဝင် ပါတီငယ်လေးခုနှင့် ညွန့်ပေါင်းအစိုးရ ဖွဲ့စည်းမည်ဟု ယနေ့ ထုတ် The Nation သတင်းစာတွင် ဖော်ပြထားပြီး ၀န်ကြီးချုပ် အဖိဆစ် ဝေ့ချာချီဝလည်း ရာထူးမှ နုတ်ထွက်ပေးရမည်ဟု ရေးသား ထားသည်။ မစ္စ ယင့်လပ်က အမျိုးသားပြန်လည် သင့်မြတ်ရေးကို လုပ်ဆောင်ရန် သံန္နိဋ္ဌာန်ချထားကြောင်း ဆန္ဒရှိသည်ဟုလည်း ဖော်ပြထားသည်။ မစ္စတာ သက်ဆင် ၀န်ကြီးချုပ်အဖြစ် တာဝန်ယူစဉ်က အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများနှင့် ဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်ခဲ့ပြီး အထူးသဖြင့် မြန်မာ နိုင်ငံ တွင် ထိုစဉ်ကအုပ်ချုပ်ခဲ့သည့် စစ်အစိုးရနှင့်ဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်ခဲ့ကာ ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းတွင် ငွေအလုံးအရင်းဖြင့် ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ဖူးသည်။ ထို့အပြင် ဘန်ကောက်မြို့ရှိ မနီလွိုင် ဒုက္ခသည်စခန်းကို ဖျက်သိမ်းကာ မြန်မာဒုက္ခသည်များကို နယ်စပ်ဒေသသို့ ပို့ဆောင်ခဲ့သည့် အ ပြင် တရားမ၀င်ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားများကို မှတ်ပုံတင်ပြုလုပ်ပေးခဲ့သည်။ လက်ရှိ ထိုင်းနိုင်ငံတွင်လည်း မြန်မာနိုင်ငံမှ ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမား၂သန်းမှ ၄သန်းအတွင်း အလုပ်လုပ်ကိုင်နေပြီး နယ်စပ် ဒေသ ရှိ ဒုက္ခသည်စခန်းများတွင်လည်း ဒုက္ခသည် သိန်းနှင့်ချီ ရှိနေသည်။ ထိုင်းနိုင်ငံတွင် လူအခွင့်အရေးများဆောင်ရွက်နေသည့် ဘန်ကောက်မြို့ အခြေစိုက် လူအခွင့်အရေး တိုးတက်ရေးအဖွဲ့ (HRDF) ၏ အကြံပေးပုဂ္ဂိုလ် အန်ဒီဟောက လက်ရှိ အနိုင်ရရှိထားသည့် ဖုယာ့ထိုင်းပါတီသည် ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားများနှင့် ပတ်သက်၍ မည်သို့သဘောထားမည်ကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရသေးကြောင်း ပြောသည်။ "ကျနော်သိရသလောက် ဒီမိုကရက်ပါတီ လက်ထက် အလုပ်သမားတွေက အဆင်မပြေမှုများတယ်လို့ ပြောကြတယ်"ဟု အန်ဒီဟော က ဆိုသည်။ ချင်းမိုင်အခြေစိုက် အမျိုးသမီးများ အဖွဲ့ချုပ်(မြန်မာနိုင်ငံ)မှ အတွင်းရေးမှူး ဒေါ်တင်တင်ညိုက မစ္စ ယင့်လပ် အရွေးချယ်ခံရခြင်းကို ကြိုဆိုကြောင်း၊ ထိုင်းနိုင်ငံတွင် အခြေစိုက်သည့် မြန်မာအတိုက်အခံအဖွဲ့အစည်းများအပေါ်တွင် မည်သို့သဘောထားမည်ကို စောင့်ကြည့် ရမည်ဖြစ်ကြောင်း ပြောဆိုသည်။ KIA နှင့် အစိုးရတပ်များ တိုက်ပွဲ ဆက်ဖြစ် ဧရာဝတီ Monday, 04 July 2011 19:06 အစိုးရ တာဝန်ရှိသူများနှင့် ကချင် လွတ်လပ်ရေး အဖွဲ့ (KIO) ခေါင်းဆောင်များ အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေးပြုလုပ်ရန် ဆွေးနွေးခဲ့ကြ သော်လည်း တိုက်ပွဲများ ဆက်လက် ဖြစ်ပွားနေကြောင်း သိရသည်။ ဇွန်လ ၃၀ ရက်နေ့က အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေး တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပြီး၂ ရက်ခန့် အကြာ တိုက်ပွဲများ ဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ အစိုးရစစ်တပ်နှင့် ကချင် လွတ်လပ်ရေး တပ်မတော်(KIA) တပ်ဖွဲ့ဝင်များ ပြီးခဲ့သည့် တပတ် စနေနေ့က တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ရာ အစိုးရတပ်ဘက်က၂ ဦး ကျဆုံးသွားကြောင်း KIA တွဲဖက် အတွင်းရေးမှူး ဦးလနန်က ပြောသည်။ KIA တပ်မဟာ ၅ ထိန်းချုပ်ရာ မိုးညှင်းမြို့နယ် ဆင်ဘိုဒေသတွင် လှုပ်ရှားနေသည့် အစိုးရတပ် ခြေမြန်တပ်ရင်း (ခမရ) ၁၄၁ တပ်ဖွဲ့ဝင်များကို ခြုံခိုတိုက်ခိုက်ခဲ့သောကြောင့် ကျဆုံးသွားကြောင်း ၎င်းက ဆိုသည်။ တိုက်ပွဲ ဖြစ်ပွားချိန်တွင် အစိုးရတပ်ဘက်မှ စစ်သည် အင်အား ၄၀ ခန့်ရှိကြောင်း၊ KIA ဘက်မှ ထိခိုက်ကျဆုံးမှု မရှိကြောင်း ဦးလနန်က ဆက်ပြောသည်။ ကချင် ဒေသခံများ ပြောပြချက်အရ ယမန်နေ့က ကချင်ပြည်နယ် ပူတာအိုနှင့် ဆွမ်ပရာဘွမ်မြို့နယ် အကြားရှိ တံတား တစင်း ကိုလည်း KIA တပ်ဖွဲ့ဝင်များက ဗုံးခွဲဖျက် ဆီးခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ ဦးလနန်ကမှု ယင်း တံတားဖျက်ဆီးမှုနှင့် ပတ်သက်၍ ဒေသခံများ၏ ပြောကြားချက်ကို ၎င်းအနေဖြင့် ကြားသိရကြောင်း ပြော ဆိုသော်လည်း KIA တပ်ဖွဲ့ဝင်များ၏ လက်ချက်ဖြစ်ကြောင်း အတည်မပြုခဲ့ပေ။ မြစ်ကြီးနားမြို့မှ ဗန်းမော်မြို့သို့ ခရီးသည် ကားများ ပုံမှန် ပြန်လည် ပြေးဆွဲနေပြီး တချို့ကုန်သည်များက လိုင်ဇာမြို့အထိ ကုန်ပစ္စည်းများ လာတင်ကြောင်း သိရှိရသည်။ ဦးလနန်က"နှစ်ဘက် တွေ့ဆုံတာလည်း ဘာမှ အကောifအထည် မဖော်ရသေးဘူးဆိုတော့ ဒုက္ခသည်တွေကလည်း ဘယ်မှ မပြန်ရဲကြသေးဘူး"ဟု ဆိုသည်။ အစိုးရက ကချင်ပြည်နယ် မိုးမောက်မြို့နယ် အတွင်းရှိ တာပိန် ရေအားလျှပ်စစ် စီမံကိန်း အနီးရှိ KIA တပ်များအား လုံခြုံရေး အရ စိတ်မချရဟု အကြောင်းပြကာ ထွက်ခွာရန်ပြောဆိုခဲ့ပြီး ဇွန် ၉ ရက်နေ့က စတင်၍ တိုက်ပွဲများ နေ့စဉ်နီးပါးဖြစ်ပွားခဲ့ကြ သည်။ ယင်းတိုက်ပွဲများကြောင့် ဒေသခံ ထောင်နှင့်ချီ၍ ထွက်ပြေး တိမ်းရှောင်ခဲ့ကြရသည်။ ယခင် စစ်အစိုးရနှင့် KIO သည် ၁၉၉၄ ခုနှစ်က စတင်၍ အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ယမန်နှစ် အောက်တိုဘာလ အတွင်းက အစိုးရ သတင်းစာများ၌ KIA ကို "သောင်းကျန်းသူ"ဟု ပြန်လည်သုံးနှုန်းခဲ့ ပြီးနောက် အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေးလည်း ပျက်ပြယ်ခဲ့သည်။ ယိုယွင်းနေသော မြန်မာ့တရားစီရင်ရေးစနစ်ရဲ့ ပုံရိပ်လွှာတခု ထက်အောင် Monday, 04 July 2011 16:05 ဆောင်းပါး ကိုသန်းဦးနဲ့ မိတ်ဆွေ လယ်သမား ၄ ယောက်ဟာ သူတို့နေထိုင်ရာ စစ္စရံရွာကို ဆိုက်ကယ်စီးပြီး ပြန်အလာ ရွာအ၀င်လမ်းနဲ့ မနီးမဝေးမှာ မထင်မှတ်ဘဲ လူ ၂၀ ယောက်ခန့်က ၀ိုင်းဝန်းရိုက်နှက် ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီရိုက်နှက်ခဲ့ သူတွေကပဲ သူတို့ကို တရားစွဲလို့ မင်းလှမြို့နယ် တရားရုံးက မေလထဲမှာ ကိုသန်းဦးနဲ့ မိတ်ဆွေ လယ်သမားများကို ထောင်ဒဏ် ၁၀ နှစ်ကျော်စီ ချမှတ်ခဲ့ပါတယ်။ စစ္စရံကျေးရွာဆိုတာ မြန်မာနိုင်ငံအလယ်ပိုင်း မကွေးတိုင်း ကံမမြို့နယ်က ရွာလေးတရွာ ဖြစ်ပါတယ်။ လယ်ယာလုပ်ငန်းနဲ့ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုကြတဲ့ ကိုသန်းဦးတို့အမှုကို ရန်ကုန်မြို့က ရှေ့နေကြီး ဦးအောင်သိန်းက အထက်တရားရုံးဖြစ်တဲ့ မင်းဘူးခရိုင်တရားရုံးကို အယူခံဝင်ခဲ့တာကြောင့် သူတို့အားလုံးကို ထောင်ဒဏ် ၃ လစီ ပြောင်းလဲချမှတ်ခဲ့ပါတယ်။ ဘာကြောင့် မြန်မာ့တရားစီရင်ရေးစနစ်မှာ ဒီလောက်ကွာခြားတဲ့ ပြစ်ဒဏ်ပြင်ဆင်မှုမျိုး ဖြစ်ပေါ်ရပါသလဲ၊ မူလစီရင်ချက်ကို ချမှတ်တဲ့ တရားရုံးက တရားစီရင်ရေးစနစ်ကို မမှန်မကန် အသုံးချခဲ့လို့လားလို့ ရှေ့နေကြီး ဦးသိန်းအောင်ကို မေးတော့ "ဒါမျိုးက ဖြစ်တောင့်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ ကိစ္စပါ။ ဒါပေမယ့် သူတို့က မူလတရားရုံးရဲ့စီရင်ချက်ဖြစ်တဲ့ အပြစ်ရှိတယ်ဆိုတဲ့ အချက်ကိုတော့ အကာအကွယ်ပေးထားတယ်ဗျ။ လုံးဝလွှတ်လိုက်တာ မဟုတ်ဘူးလေ။ ပြစ်ဒဏ်ကို ပြင်ဆင်သတ်မှတ်ပေးတာပဲရှိတယ်" လို့ ရှင်းပြပါတယ်။ သရက်ထောင်ထဲမှာ ချုပ်နှောင်ခံထားကြရတဲ့ ကိုသန်းဦးတို့ အခု လွတ်မြောက်လာပါပြီ။ ၀မ်းသာစရာကောင်းတဲ့ သတင်းတခုဖြစ်ပေမယ့် အဲဒီအမှုနောက်ကွယ်က ဖြစ်ရပ်တွေက မြန်မာနိုင်ငံ တရားစီရင်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး အတွေးပွားစရာ မေးခွန်း အများအပြား ပေါ်ပေါက်လာပါတယ်။ မြန်မာပြည်က တရားစီရင်ရေးစနစ်မှာ ပြစ်မှုနဲ့ပြစ်ဒဏ် မျှတမှုရှိရဲ့လားဆိုတာ အခု ကိုသန်းဦးတို့အမှုက နမူနာထား မေးခွန်းထုတ်စရာ ဖြစ်လာပါတယ်။ မြန်မာပြည်အနှံ့က ထောင်ထဲမှာ အကျဉ်းကျခံနေကြသူတွေ ဘယ်လောက်များများ ရှေ့နေမငှားနိုင်လို့၊ အယူခံမတင်နိုင်လို့ ဒါမှမဟုတ် အယူခံတင